Allgedo.com » Ahlu Sunna Waljamaaca oo lagu soo biiriyay dowlada Soomaliya
Ahlu Sunna Waljamaaca oo lagu soo biiriyay dowlada Soomaliya
Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in waayadan kulan balaaran uu halkas uga soconayay maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee bartamaha Soomaaliya iyo xubno ka socda dowlada Soomaaliya.
Kulamadan Maalmihii ugu dambeeyay uga socday Galgaduud masuuliyiin ka tirsan Ahlu sunna iyo maamulka Dowlada Soomaaliya ee Gobolada Dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo qaramayn lahaa maamulka ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca.
Wararka ayaa sheegay in gudoomiyaha Ahlu sunna ee Gobolka Galgaduud Axmed Yuusuf Xasan Ciyow uu ka dhaadhicyya madaxda Ahlu Sunna Waljamaaca in ay ku biiraan dowlada.
Isagoo lahadlayay saxaafadda aya Axmed Yuusuf Xasan Ciyow waxaa uu sheegay in kulamadaasi lasoo afmeeray islamarkaana la wada saxiixay in la qarameeyo ciidamada Ahlu sunna ee ku sugan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Waxaa uu sheegay in dowlada Soomaaliya ay howlgallo kadhan ah Shabaab ka bilaabayso guud ahaan gobolladaas.
Marar badan ayaa la sheegay in Ahlu Sunna Waljamaaca la qaramayn doono laguna biirin doono dowlada Soomaaliya, iyadoona heshiiskaas lasoo sheegayo in ay ku lug leedahay dowlada Itoobiya.